Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal ayaa la soo warinaya inuu deyro kala - Latest News Updates
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal ayaa la soo warinaya inuu deyro kala
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal ayaa la soo warinaya inuu deyro kala kulmay maamulka boqortooyada Emirate-ka kadib markii uu weydiisatay iney siiyaan xoogo lacag ah si uu u rido ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre sidaas waxaa Somaliweyn u sheegay siyaasi xogogaal ah.
Mursal ayaa doonaya in la bixiyo Kheyre, waxaana uu dhowr jeer la fariistay xildhibaanada Daarood ee doonaya in xukuumada mooshin laga keeno kadibna la bixiyo. Qof ka mid ah shaqaalaha xafiiskiisa ayaa horey ugu sheegay Somaliweyn in maalmihii dambe uu Mursal la kulmaayay xildhibaanada mooshinka wada.
Markii uu arkay in mooshin socdo ayuu la xiriiray Emirate-ka wuxuuna weydiistay lacagtii uu ku bixin lahaa Kheyre, balse waxaa loo sheegay in aaney aamini karin mar labaad.
Horey ayaa la sheegaa inuu lacag uga qaatay xiligii uu qabanayay mooshinkii madaxweynaha, kadibna waa uu ka laabtay oo waxba laguma qaban lacagtaas. Sidaa darteed Emirate-ku uma arkaan Mursal siyaasi miisaan leh oo go’aan qaadan kara.
Sida xogta aan ku helnay. Waxey Emirate-ku ku yiraahdeen Mursal “Marka hore is mareey oo mooshinka qabo, kadib wixii aad rabto oo lacag ah na weydii, laakiin waxba lacag ah kuuma hormarin karno.
Arrintaan ayaa niyad jabin karta afhayeenka Baarlamanka oo la aaminsan yahay inuu ka cabsanaayo in Kheyre maal-galiyo mooshin isaga lagu ridaayo.
Siyaasiyiin badan oo lacago kasoo qaatay wadamo shisheeye oo fulin waayay wixii lagu soo heshiiyay ayaa u muuqda inuu kaarkoodu ka gubtay labada dhinac ee Soomaalida iyo dhinicii lacagta bixiyay. Mursal ayaa hogaaminaya kooxdaas.